Degmada Baardheere Oo Saaka Lagu Gubay Qaad - Awdinle Online
Degmada Baardheere Oo Saaka Lagu Gubay Qaad
April 2, 2020 (Awdinle Online) –Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Baardheere, ee gobolka Gedo, ayaa saaka meel fagaare ah ku gubay qaad si dhuumaaleysi ah lagu soo geliyay degmadaas.
Xidigle, Daa’uud Hafow Cali, oo kamid ah saraakiisha ururka 49 aad guutada 10 aad, qeybta 43 aad ayaa warbaahinta u sheegay in shacabka uga digayaan in ay jabaan amarka dowladdu soo rogtay oo ah in qaad la keeni karin dalka.
Qaadkan ayaa lagu soo qabtay mid kamid ah baraha laga soo galo degmada, xilli habeen ah. Saraakiisha ayaa mar kale, ku celiyay in ciddii lagu helo in ay qaad soo gelinayo degmada Baardheere tallaabo laga qaadi doono.
Dowladda Soomaaliya ayaa joojisay duuliyaadyadii dibadda ka imaan jirey sidoo kale waxaa ay dowladdu mamnuucday qaadkii dalka maalin kasta loo soo waaridi jirey iyadoo arrintaas loogu gol leeyahay ka hor taga cudurka COVID-19 oo caalamka si weyn u saameeyay.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo cafis u fidiyay 148 Maxbuus.
Next articleGeeridii Ra’iiul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay Amiirka Qater